20KVA-210KVA EZIIMODYULI UPS
Mars Series EZIIMODYULI UPS isebenzisa kakuhle online double technology eliphezulu ukuguquka, kunye nokusebenza ingaba 94.5%. Kwaye olungenazimfanta ihlanganiswe kunye zoyilo zakutshanje igumbi data, nto leyo ephezulu-ukuthembeka ogcweleyo lokukala iinkqubo UPS yemodyuli.
Mars Series EZIIMODYULI UPS inkqubo ezakhiwe bhetyebhetye kakhulu, kunye neemodyuli amandla kaThixo usebenzisa online uyilo eshushu-swappable, leyo ngokulula zisuswe, ifakelwe kwaye zigcinwe xa le nkqubo isebenza, kodwa ezi zinto zilandelayo zingachaphazeleki nokusebenza nkqubo kunye neziphumo, awayenzayo kufike njengotyalomali wenene imfuneko. Yiyiphi na zombini ukuhlangabezana izixhobo umsebenzisi eyandisiweyo lidinga ixesha kamva, kodwa zinciphisa lokuqala ixabiso lokuthenga.
Mars Series EZIIMODYULI UPS ibonelela iimodyuli 20KW namandla 30KW kunye iintlobo ezimbini nkqubo nekhabhathi, umsebenzisi akanokukwazi ukuba evumayo uqwalasele ngokungqinelana imfuno umthwalo. Ikhabinethi single onokufikelela iyohluleka ukuya 210KW, nokunika 2 iintlobo amahla inkqubo 90KW kunye 120KW, nenokuthi kuba eyakhelwe-ngaphakathi modules battery, kuba abasebenzisi ukhethe lula.
ukusebenza 1.High online kabini technology ukuguqulwa
Mars series uhlolwe iimodyuli lisetyenziswa online double technology zoguqulo kunye namaziko asebenza kwizinga eliphezulu phezu 94.5% kwi-50% umthwalo. Oku kunciphisa kakhulu iyonke Indleko Iyonke Ubunikazi (TCO).
ulawulo DSP sinika oluphuculiweyo isisombululo kunye nokusebenza eliphezulu. Kuhlanganiswe kuyilo yemodyuli kunye nobuchwepheshe ngaxeshanye, lula ukwanda ngamandla elizayo.
3.Unity amandla output factor
Mars series ihambisa umanyano output amandla (kVA = kW) ukubonelela amandla amandla ubuninzi kwisibhambathiso imithwalo enzima. It ezanelisa iimfuno abancedisi lwamva uzilungisele IT utyalo zonke idenariyo.
design 4.Modular abalandeli MTTR
uyilo iimodyuli lisetyenziswa kwi imodyuli ngamandla, imodyuli titsh kunye module bebhetri. Kuya lula ulondolozo kunye nokutshintshwa eliphantsi MTTR (Mean Time To Repair).
5.Ease ukufakwa kunye nokugcinwa
Eyakhelwe-ngaphakathi ulondolozo bypass uqinisekisa ngamandla okuqhubekayo imithwalo ezibalulekileyo ngexesha yesondlo UPS. Ngapha koko, ukuba kube lula ufakelo nokugcinwa, lonke ulawulo panel nezidibanisi zibe nokufikeleleka ngaphambili.
6.Flexible uqwalaselo ibhetri akufundisayo izicelo ezahlukeneyo
amanani Ibhetri zilungiswe evumayo. Iza ukulungelelanisa iimfuno zamandla ezahlukeneyo kwaye bufutshane inkqubo kwemitshini. ombane Battery lingamiselwa kumaqhekeza-32 ukuya kuma-40 umtya nganye.
7.Adjustable abize yamanje
Ulungiselela ubuninzi 8A womserbia njengangoku zonke mnqongo amandla kwaye adjustable esekelwe imfuneko.
khono sindisa 8.High
EZIIMODYULI UPS ixhasa, 110% omninzi ukuba imizuzu engama-60, 120% imizuzu eli-10, 150% ye umzuzu 1.
9.Graphic 5.7 "uyilo LCD yolawulo lula
Eyenzelwe ulawulo lula, baxhotyiswa 5.7 "graphic LCD screen. design enobuchule nelikhuthaza umboniso ulwazi ezichongiweyo kanye ukumisa phambili.
10.N + 1 okanye N + X komsebenzi parallel ukuba isiqinisekiso amandla
izakhiwo lokukala ikuvumela ukuba nokwandisa inkcitho iindleko ukuhlangabezana neemfuno amandla nkqo ukwandisa na indawo yokubeka elinye ukusuka 20KVA ukuya 210KVA kwaye ukufikelela N + 1 okanye N + X komsebenzi kwi yokubeka efanayo.
Size , D X W X H (mm)
Ubunzima ( K GS)
Wula: Enye imodyuli ibhetri iqulethe 10pcs of 12V9AH kwatywinwa ukukhokela iibhetri asidi yetreyi yeKDE mnye. Enye epheleleyo iseti ibhetri iqulethe iimodyuli ibhetri 4.
20KVA-210KVA (okungu-ezintathu kunye outs ezintathu)
3-ngxenye / 3-sigaba ngaphandle
Comment = Yakhelwe-in Battery Module
Battery Pack yangaphandle
IKhabhinethi Net Weight (Kum)
305 ~ 477VAC kwi-100% Umthwalo; 208 ~ 304VAC kwi <70% Umthwalo
50 / 60Hz (Auto Eqonda)
> 0,99 @ 100% Umthwalo,> 0,98 @ 50% Umthwalo
Harmonic ubugqwetha (THDi)
<3% @ 100% Umthwalo
Ombane Imimiselo (chaza uqinise)
≦ ± 1% lohlobo (Load Ukulinganisela); ≦ ± 2% lohlobo (Umthwalo engalungelelananga)
Ombane UMmiselo (ixesha elifutshane)
≦ ± 5% gumbini
Range Ubuninzi (Iirobhothi)
46Hz ~ 54Hz okanye 56Hz ~ 64Hz
sindisa wokuvavanya ulwazi
iyure-1 110%, min 10 120%; 1 min ngenxa 150%, 200ms ngenxa> 150%
≦ 1.5% THD (Linear Layisha); ≦ 4% THD (Umthwalo Non-linear)
Ukuya ku 94.5%
Ibhetri / Charger
Ziyabuya Charging Voltage
Ukukhulisa Charging Voltage
Current abize obukhulu
8A kwimodyuli amandla ngamnye (User adjustable)
IEC / EN 62040-2 Udidi C3
0 ~ 95% Non-Ukujiya
<1000m amandla NOMINAL
Mars Series EZIIMODYULI UPS 20KVA-210KVA
Previous: 1-3KVA High Frequency UPS leposi Okulandelayo:40-120KVA High Frequency Online UPS (3: 3)